HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mizo Mooré Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
‘Ny [didy] faharoa dia izao: “Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao.”’—MAT. 22:39.
Iza marina no namantsika?
Nahoana isika no tokony ho tia namana, ary ahoana no fomba ampisehoantsika an’izany?
Inona avy no mampiavaka ny fitiavana, araka ny 1 Korintianina 13:4-8?
1, 2. a) Inona ilay didy faharoa lehibe indrindra, araka ny nolazain’i Jesosy? b) Inona avy no fanontaniana hodinihintsika izao?
TE HAMANDRIKA an’i Jesosy ny Fariseo iray, ka nanontany hoe: “Mpampianatra ô, inona no didy lehibe indrindra ao amin’ny Lalàna?” Hitantsika tao amin’ny lahatsoratra teo aloha fa namaly i Jesosy hoe: “ ‘Tiavo i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo ary ny sainao manontolo.’ Izany no didy lehibe indrindra sady voalohany.” Hoy koa i Jesosy: “Ny faharoa, izay toy izany ihany, dia izao: ‘Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao.’ ”—Mat. 22:34-39.
2 Nilaza i Jesosy fa tokony ho tia ny namantsika tahaka ny tenantsika isika. Tsara àry ny mieritreritra hoe: ‘Iza marina moa no namantsika? Ahoana no ampisehoantsika fa tia azy ireny isika?’
IZA MARINA MOA NO NAMANTSIKA?
3, 4. a) Inona no fanoharana nolazain’i Jesosy mba hamaliana an’ilay fanontaniana hoe: “Fa iza marina moa no namako?” b) Inona no nataon’ilay Samaritanina mba hanampiana an’ilay lehilahy voaroba? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
3 Mety hieritreritra isika hoe izay olona tia manampy antsika sy mifandray am-po amintsika no atao hoe namana. Diniho anefa ny nolazain’i Jesosy tamin’ny lehilahy iray mpanamarin-tena, izay nanontany hoe: “Fa iza marina moa no namako?” Nilaza an’ilay fanoharana momba ny Samaritanina tsara fanahy i Jesosy, mba hamaliana azy. (Vakio ny Lioka 10:29-37.) Nisy nanendaka sy nikapoka ny lehilahy jiosy iray ka saika maty. Mety hihevitra isika hoe ilay mpisorona israelita sy ilay Levita no tokony ho nanampy azy, satria izy ireo no noheverina fa namany. Nandalo fotsiny anefa izy ireo. Samaritanina iray kosa no nanampy azy. Nohambanian’ny Jiosy anefa ny Samaritanina na dia nanaraka ny Lalàn’i Mosesy aza.—Jaona 4:9.
4 Nanisy menaka sy divay tamin’ny ferin’ilay lehilahy ilay Samaritanina tsara fanahy, mba ho sitrana haingana ny ratrany. Nanome denaria roa an’ilay tompon’ny tranom-bahiny koa izy, mba hikarakarana an’ilay lehilahy. Karaman’olona roa andro eo ho eo izany. (Mat. 20:2) Mora àry ny nahita hoe iza no tena naman’ilay lehilahy naratra. Asehon’ilay fanoharana fa tokony hangoraka sy haneho fitiavana ny mpiara-belona isika.
Manao zavatra haingana ny mpanompon’i Jehovah mba hanehoana fitiava-namana (Fehintsoratra 5)
5. Inona no nataon’ny mpanompon’i Jehovah rehefa nisy rivo-doza, ka ahitana fa tia namana izy ireo?
5 Tsy fahita firy ny olona mangoraka toa an’io Samaritanina io, indrindra amin’izao “andro farany” izao. Maro no tsy tia ny mpianakaviny sy masiaka be ary tsy tia ny tsara. (2 Tim. 3:1-3) Mety hisy olana lehibe, ohatra, rehefa misy loza voajanahary. Diniho izay nitranga rehefa namely an’i New York ny Rivo-doza Sandy, tamin’ny Oktobra 2012. Nisy nanararaotra nandroba tany amin’ny faritra iray voa mafy, nefa ny olona tao efa nijaly satria tsy nanana izay tena nilaina, toy ny herinaratra. Ny Vavolombelon’i Jehovah kosa nanao fandaharana mba hanampiana ny mpiray finoana taminy sy ny olon-kafa tao. Tia namana ny Kristianina matoa manao toy izany. Inona koa no azo atao mba hampisehoana fa tia namana isika?
FOMBA AMPISEHOANA FITIAVA-NAMANA
6. Nahoana no azo lazaina hoe tia namana isika rehefa mitory?
6 Ampiasao ny Baiboly mba hanampiana ny olona. Manao izany isika rehefa miezaka hiresaka amin’izy ireo ny “fampiononana avy ao amin’ny Soratra Masina.” (Rom. 15:4) Tena tia namana isika rehefa mitory ny fahamarinana avy ao amin’ny Baiboly. (Mat. 24:14) Voninahitra ny mitory ny hafatra avy amin’ilay “Andriamanitra manome fanantenana.”—Rom. 15:13.
7. Inona ilay fitsipika ao amin’ny Matio 7:12, ary inona no fitahiana raisintsika rehefa mankatò azy io isika?
7 Araho ilay fitsipika ao amin’ny Matio 7:12. Nandritra an’ilay Toriteny teo An-tendrombohitra i Jesosy no nilaza azy io. Hoy izy ao: ‘Izay rehetra tianareo hataon’ny olona aminareo dia mba ataovy aminy koa. Izany, raha ny marina, no tian’ny Lalàna sy ny Mpaminany hambara.’ Mampihatra ny toro lalana raketin’ny “Lalàna” (Genesisy ka hatramin’ny Deoteronomia) sy “ny Mpaminany” (ireo bokim-paminaniana ao amin’ny Soratra Hebreo) isika, rehefa manaraka an’io fitsipika io. Asehon’ireo asa soratra ireo fa tahin’Andriamanitra ny olona tia namana. Nilaza, ohatra, i Jehovah ao amin’ny bokin’i Isaia hoe: ‘Manaova ny rariny sy ny fahamarinana. Sambatra ny olona manao izany.’ (Isaia 56:1, 2) Hahazo fitahiana tokoa isika raha be fitiavana sy manao ny marina, rehefa mifandray amin’ny mpiara-belona.
8. Nahoana isika no tokony ho tia ny fahavalontsika, ary inona no mety ho vokatr’izany?
8 Tiavo ny fahavalonao. Hoy i Jesosy: “Efa renareo fa voalaza hoe: ‘Tiavo ny namanao ary ankahalao ny fahavalonao.’ Izaho kosa anefa milaza aminareo hoe: Tiavo foana ny fahavalonareo, ary mivavaha foana ho an’izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny Rainareo izay any an-danitra ianareo.” (Mat. 5:43-45) Hoy koa ny apostoly Paoly: “Raha noana ny fahavalonao dia omeo sakafo, ary raha mangetaheta izy, omeo zavatra hosotroiny.” (Rom. 12:20; Ohab. 25:21) Araka ny Lalàn’i Mosesy, dia tokony hampiana ny olona iray na dia fahavalo aza, raha voatsindrin’ny entana ny bibiny. (Eks. 23:5) Mety ho lasa mpinamana ny olona mifankahala, rehefa miara-miasa toy izany. Maro amin’ny fahavalontsika no lasa tsy mankahala antsika intsony, satria maneho fitiavana amin’izy ireo isika. Mety ho lasa mpanompon’i Jehovah ny sasany amin’izy ireny, eny fa na ireo manenjika be aza. Tena ho faly isika raha mitranga izany.
9. Inona no nolazain’i Jesosy, momba ny fihavanana amin’ireo rahalahy?
9 “Ataovy izay hihavananareo amin’ny olon-drehetra.” (Heb. 12:14) Tafiditra amin’izany ny rahalahintsika, satria hoy i Jesosy: “Raha mitondra fanomezana ho eo amin’ny alitara ... ianao, ka eo no mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny rahalahinao, dia avelao eo anoloan’ny alitara eo ny fanomezanao, ka mandehana aloha mihavana amin’ny rahalahinao. Rehefa miverina ianao vao atolory ny fanomezanao.” (Mat. 5:23, 24) Hotahin’Andriamanitra isika raha tia an’ireo rahalahintsika, ary manao zavatra haingana mba hihavanana aminy rehefa misy olana.
10. Nahoana isika no tsy tokony ho tia manakiana?
10 Aza tia manakiana. Hoy i Jesosy: “Aza mitsara intsony mba tsy hotsaraina, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka izay famarana ampiasainareo no hamarana ho anareo. Koa nahoana ianao no mijery ny sombin-kazo eo amin’ny mason’ny rahalahinao, nefa ny vatan-kazo eo amin’ny masonao tsy mba heverinao? Ary ahoana no ilazanao amin’ny rahalahinao hoe: ‘Aleo hesoriko ny sombin-kazo eo amin’ny masonao’, nefa jereo fa misy vatan-kazo eo amin’ny masonao? Ry mpihatsaravelatsihy! Esory aloha ny vatan-kazo eo amin’ny masonao, dia ho hitanao tsara ny hanesorana ny sombin-kazo eo amin’ny mason’ny rahalahinao.” (Mat. 7:1-5) Tena manampy antsika izany mba tsy hitsingoloka ny fahadisoana kely ataon’ny hafa, satria na isika aza mety hanao fahadisoana maro.
NY FOMBA TSARA INDRINDRA AMPISEHOANA FITIAVANA
11, 12. Inona no fomba tsara indrindra ampisehoantsika fa tia namana isika?
11 Inona no fomba tsara indrindra ampisehoana fa tia namana isika? Ny mitory ny vaovao tsaran’ilay Fanjakana, toy ny nataon’i Jesosy. (Lioka 8:1) Naniraka ny mpanara-dia azy i Jesosy mba ‘hanao mpianatra ny olona any amin’ny firenena rehetra.’ (Mat. 28:19, 20) Manampy ny mpiara-belona amintsika hiala amin’ilay lalana lehibe sy malalaka mankany amin’ny fandringanana isika, rehefa manao io asa io. Ampiantsika izy ireo mba handeha amin’ilay lalana ety mankany amin’ny fiainana. (Mat. 7:13, 14) Azo antoka fa mitahy ny ezaka ataontsika i Jehovah.
12 Manahaka an’i Jesosy isika, ka manampy ny olona hahatsapa fa mila an’Andriamanitra izy ireo. (Mat. 5:3) Itoriantsika “ny vaovao tsaran’Andriamanitra” ireo manaiky ampiana. (Rom. 1:1) Lasa mihavana amin’i Jehovah ireo manaiky ny vaovao tsara, noho ny soron’i Jesosy. (2 Kor. 5:18, 19) Ny fitoriana ny vaovao tsara àry no fomba lehibe indrindra ampisehoantsika fa tia namana isika.
13. Inona no tsapanao noho ianao mpitory ilay Fanjakana?
13 Afaka manampy ny olona hankatò ny fitsipik’i Jehovah isika, rehefa manomana tsara alohan’ny hiverina hitsidika sy hampianatra Baiboly. Mety hanao fiovana lehibe ilay mpianatra, vokatr’izany. (1 Kor. 6:9-11) Mampahery tokoa ny mahita ny fomba anampian’i Jehovah an’ireo ‘manana toe-po tsara mba hahazoana fiainana mandrakizay’, ka afaka manao ny fanovana ilaina izy ireo ary lasa akaiky azy. (Asa. 13:48) Maro amin’izy ireo no kivy nefa lasa falifaly indray, na koa nanahy tafahoatra nefa lasa matoky an’ilay Raintsika any an-danitra. Mahafinaritra erỳ ny mahita ny fandrosoan’ireo vaovao! Tsy hitanao amin’izany ve hoe tombontsoa lehibe tokoa ny mitory ilay Fanjakana? Izany no fomba tsara indrindra ampisehoana hoe tia namana isika.
NY MAMPIAVAKA NY FITIAVANA
14. Resaho amin’ny fomba fiteninao ny mampiavaka ny fitiavana, araka ny 1 Korintianina 13:4-8?
14 Hisoroka olana maro sy ho sambatra ary hotahin’Andriamanitra isika, raha mampihatra an’izay nosoratan’i Paoly momba ny fitiavana, rehefa mifandray amin’ny hafa. (Vakio ny 1 Korintianina 13:4-8.) Hodinihintsika izao izay nolazain’i Paoly momba ny fitiavana sy ny fomba ampiharantsika ny teniny.
15. a) Nahoana isika no tokony hanam-paharetana sy ho tsara fanahy? b) Nahoana isika no tsy tokony hialona sy tsy hirehareha?
15 “Ny fitiavana mahari-po sy tsara fanahy.” Manam-paharetana sy tsara fanahy amin’ny olombelona tsy lavorary Andriamanitra. Mila manam-paharetana sy tsara fanahy àry isika rehefa manao fahadisoana ny hafa, na manao zavatra tsy voahevitra, na manafintohina mihitsy aza. “Ny fitiavana tsy mialona.” Tsy hitsiriritra ny fananan’ny hafa na ny tombontsoam-panompoany àry isika raha manana ny tena fitiavana. Tsy hirehareha na hieboebo koa isika. “Fahotana daholo” mantsy “na ny maso miandranandrana na ny fo mirehareha, izay jiron’ny ratsy fanahy.”—Ohab. 21:4.
16, 17. Ahoana no ampiharantsika ny 1 Korintianina 13:5, 6?
16 Tsy hanao zavatra tsy mendrika isika raha tia namana. Tsy handainga amin’ny hafa isika, na hangalatra ny fananany, na hanao zavatra hafa mandika ny lalàn’i Jehovah sy ny toro lalany. Ankoatra izany, dia tsy hitady izay hahasoa ny tenantsika fotsiny isika raha manam-pitiavana, fa hitady izay hahasoa ny hafa koa.—Fil. 2:4.
17 Tsy mora tezitra ny olona manana ny tena fitiavana. “Tsy mitana lolompo” koa izy, ka tsy mitadidy an’izay zavatra tsy mety natao taminy. (1 Tes. 5:15) Tsy mampifaly an’Andriamanitra isika raha manao an-dolompo, sady toy ny mitahiry vainafo, izay mety hidedadeda tampoka ka hampidi-doza antsika sy ny hafa. (Lev. 19:18) Mahatonga antsika hifaly noho ny fahamarinana ny fitiavana, ary hisakana antsika ‘tsy hifaly noho ny tsy fahamarinana.’ Tsy hifaly àry isika na dia olona mankahala antsika aza no iharam-pahavoazana na mijaly noho ny tsy rariny.—Vakio ny Ohabolana 24:17, 18.
18. Inona no ianarantsika momba ny fitiavana, araka ny 1 Korintianina 13:7, 8?
18 Nilaza i Paoly hoe “mandefitra ny zava-drehetra” ny fitiavana. Raha misy olona manao zavatra mahatezitra antsika nefa mangata-pamelana, dia hamela azy isika raha manam-pitiavana. “Mino ny zava-drehetra” koa ny fitiavana. Mino izay voalazan’ny Tenin’Andriamanitra isika ary mankasitraka ny sakafo ara-panahy raisintsika. “Manantena ny zava-drehetra” ao amin’ny Baiboly isika raha manam-pitiavana, ary hiresaka amin’ny hafa ny anton’ny fanantenantsika. (1 Pet. 3:15) Mivavaka koa isika rehefa tojo zava-tsarotra, sady manantena fa ho tsara fiafara ilay izy. “Miaritra ny zava-drehetra” ny fitiavana, anisan’izany ny ratsy ataon’ny olona amintsika, ny fanenjehana, ary ny fitsapana hafa. Tsy izay ihany fa “tsy ho levona mandrakizay ny fitiavana.” Haneho fitiavana mandrakizay ny olona mankatò.
TIAVO FOANA NY NAMANAO TAHAKA NY TENANAO
19, 20. Inona no andinin-teny mandrisika antsika ho tia namana foana?
19 Ho tia namana foana isika, raha mampihatra ny torohevitry ny Baiboly. Ny olona rehetra no tokony ho tiantsika, fa tsy izay mitovy firazanana amintsika ihany. Ilaintsika ny mitadidy ny tenin’i Jesosy hoe: “Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao.” (Mat. 22:39) Samy mitaky ny itiavantsika ny namantsika i Jehovah sy Jesosy. Mivavaha amin’Andriamanitra mba hanampy anao amin’ny alalan’ny fanahiny, raha sarotra aminao indraindray ny ho tia ny hafa. Hotahin’i Jehovah ianao raha manao izany ary ho afaka haneho fitiavana.—Rom. 8:26, 27.
20 Antsoina hoe “mpanjakan’ny lalàna” ilay didy mba ho tia ny namana tahaka ny tena. (Jak. 2:8) Hoy i Paoly rehefa avy nitanisa didy vitsivitsy ao amin’ny Lalàn’i Mosesy: ‘Izay didy hafa rehetra dia efa voafintina amin’izao teny izao: “Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao.” Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa ny fitiavana no fanatanterahana ny lalàna.’ (Rom. 13:8-10) Tokony haneho fitiava-namana foana àry isika.
21, 22. Nahoana isika no tokony ho tia an’Andriamanitra sy ho tia namana?
21 Tsara ny mitadidy izay nolazain’i Jesosy momba ny Rainy, rehefa mieritreritra ny antony tokony hitiavana ny mpiara-belona isika. Nilaza izy fa “mampiposaka ny masoandrony amin’ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy” ny Rainy, ary “mandatsaka ny orana amin’ny marina sy ny tsy marina.” (Mat. 5:43-45) Tokony ho tia ny mpiara-belona àry isika, na marina izy na tsy marina. Fomba lehibe anehoana izany fitiavana izany ny fitoriana an’ilay Fanjakana, araka ny hitantsika tany aloha. Hahazo fitahiana tokoa ny mpiara-belona amintsika raha mampihatra an’izay ianarany.
22 Maro ny antony tokony hitiavantsika an’i Jehovah amin’ny fo sy ny tena ary ny saina manontolo. Maro koa ny antony tokony hitiavantsika ny namantsika. Mankatò an’ireo didy roa lehibe indrindra isika, raha tia an’Andriamanitra sy tia namana. Ary ny tsara indrindra, dia mampifaly an’ilay Raintsika be fitiavana any an-danitra izany.
Hizara Hizara “Tiavo ny Namanao Tahaka ny Tenanao”
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Jona 2014
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Jona 2014